November 24, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha November 24, 2019
(England) 24 Nof 2019. Manchester United ayaa barbaro la soo gashay kooxda Sheffield United oo ay ku booqatay garoonka Bramall Lane, kaddib markii ay ku kala baxeen 3-3, kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League ee dalka England. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 1-0 ay ku hogaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Sheffield United. […]Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Sheffield United Iyo Manchester United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
(England) 24 Nof 2019. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Sheffield United Iyo Manchester United kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka Premier League. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ee kooxaha Sheffield United Iyo Manchester United: Sheffield United XI: Manchester United XI: Gool FM.Sii akhriso
(London) 24 Nof 2019. Macalinka cusub kooxda Tottenham Hotspur ee Jose Mourinho ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guushii ugu horreysay uu la gaaray Spurs-ka qibradiisa cusub. Tottenham Hotspur ayaa shalay guul 2-3 ah kaga soo gaartay kooxda West Ham United London Stadium, kulan ka tirsanaa hoyaalka Premier League. Tottenham ayaa la dhibtoonaysay bilihii ugu […]Sii akhriso
(Liverpool) 24 Nof 2019.Liverpool ayaa habeenka Arbacada soo aadan waxay ku soo dhaweyn doontaa kooxda Napoli garoonkeeda Anfield, si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan kulamada 5-aad wareega group-yada ee tartanka Champions League. Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyay in xiddiga reer Masar ee Maxamed Saalax uu diyaar u yahay inuu ka […]Sii akhriso
(Manchester) 24 Nof 2019. Macalinka reer Norway ee Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu fariin niyadjab ah u diray taageerayaasha kooxdiisa Manchester United, taasoo ku aadan suurtogalnimada ay ku gali karaan suuqa kala iibsiga furmi doono bisha Janaayo ee soo socota. Manchester United ayaa lala xiriirinayay magacyada xiddigo dhowr ah suuqa furmi doono bisha Janaayo, waxaana ugu Sii akhriso
Soomaaliya November 24, 2019
Qaahira-(SONNA)-Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda XFS, Mudane; Xasan Xuseen Xaaji iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa Magaalada Qaahira ee Dalka Masar uga qeyb galay kulanka 35-aad ee Golaha Wasiirrada Cadaaladda Jaamacadda Carabta. Ajandaha shirka ayaa waxaa ka mid ahaa ka hortagga dembiyada abaabulan, la dagaallanka musuq-maasuqa,cirib tirka Lacag dhaqista , hab-raaca isu Sii akhriso
(Yurub) 24 Nof 2019. Waxaa la shaaciyey liiska 30-ka xiddig ee u sharraxan abaal-marinta laacibka sanadka Afrika 2019. Salah, Mane, Pepe, Auba & Mahrez ayaa hoggaaminaya liiska xddigaha u sharraxan laacibka sanadka qaaradda Afrika 2019. Xiriirka kubadda cagta CAF ayaa sii daayey liiska xiddigaha u sharraxan abaal-marin laacibka sanadka ee Afrika, taasoo looga dhawaaqi Sii akhriso
Rapat-(SONNA)-Wasiirka Wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Soomaaliya ayaa kulan gaar ah la yeeshay Agaasimaha guud ee Wasaaradda Caddaaladda Dalka Marooko. Agaasimuha ayaa Wasiirka iyo xubnaha kale ee la socday uga warramay hannaanka dhismaha hay’adaha cadaaladda Dawladda Marooko iyo habraaca shaqo ee ay leeyihiin. Wuxuuna tusaalayaal kasiiyay sida ay u wada Sii akhriso
Muqdisho.(SONNA)…Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta xaruntooda Magaalada Muqdisho ku sii ambaqaaday kulankoodii caadiga ahaa golahaasi. Ajendaha kulanka maanta ee Golaha Aqalka Sare ayaa ku saabsana akhrinta labaad ee Hindise Sharciyeedka Shirkadaha Soomaaliyeed. Xildhibaanada Golaha Aqalka Sare ayaa shalay ansixiyay Hindise-Sharciyeedka Sii akhriso
Somali News November 24, 2019
Mogadishu(SONNA)- The Head of African Union Mission in Somalia (AMISOM) Ambassador Francisco Madeira visited Beledweyne on Saturday where he said that the African Union Commission will soon provide relief support amounting to US$87,000 in the form of medical supplies and non-food items. Beledweyne, in the Hirshabelle State of Somalia, was devastated by heavy rains and Sii akhriso